firy ny poti-dia ao amin'ny poker
Frantsay lalao an-tserasera regulator ARJEL dia nofoanana telo ny fahazoan-dalana an'ny 200%Poker sy Sajoo manaraka ny tsirairay fanakatonana sy ny fifindra-monina mba bwin.fr. Ankoatra izany, ny frantsay lalao an-tserasera mpandraharaha manana fahefana Iliad Lalao ny manampy sehatra vaovao anarana amin'ny online poker sy ny fanatanjahan-tena betting fanatitra noho ny namany sary Chili.fr.
200% Poker efa fahazoan-dalana amin'ny ARJEL hatramin'ny 13 jolay, 2010, fa ny toerana nakatona tamin'ny volana jolay 2011, ary nanambara ny rehetra ny mpilalao fa tsy nisokatra indray. Iray amin'ireo lehibe ny vato mahatafintohina ho an'ny 200% Poker dia ny tsy fahampian'ny ny fifamoivoizana sy ny fa mahantra ny tombana an-tsena noho ny tompony firy ny fihanaky ny poti-tany ny poker. ARJEL koa nanapa-kevitra hanafoana ny fahazoan-dalana ny SAjOO Poker firy ny poti-dia ao amin'ny poker.
Sajoo Poker mpilalao efa nifindra monina ny Bwin, nefa ny antoko eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny ARJEL manamarika ny ofisialy ny fanakatonana ny site sy amin'ny fomba mahomby mifarana ny lalao fahazoan-dàlana. Ny ankamaroan ' ireo fanapahan-kevitra ireo no andrasana, na dia izany aza anefa, ny orinasa matihanina dia miahiahy ny mahita fa ny frantsay lalao an-tserasera regulator ho mitana ny Feno jery Mitongilana ny fahazoan-dalana inona no 21+3 ao blackjack. ARJEL mihantona ny fahazoan-dalana Feno jery Mitongilana Poker 4 jolay, 2011, ary Feno jery Mitongilana Poker intsony manana ny iraisam-pirenena ny fahazoan-dalana, ary nomena ny olana amin'ny Alderney, maro ireo nanantena ARJEL tanteraka ny hanafoana ny fahazoan-dàlana, nefa tsy izany inona no 21 miampy 3 blackjack. Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre.